Indlela yokunqoba indoda | Amadoda anesitayela
U-Alicia tomero | 21/11/2021 11:51 | Izithandani Nezocansi
Ubuciko be anqobe umuntu yinto ebilokhu yenziwa phakathi namakhulu eminyaka. Indlela yokuyenga ishintshile phakathi neminyaka futhi amasu afanele esiphakamiso esihle angaphezulu kakhulu kunasesikhathini samanje.
Zonke izinto eziyisisekelo ezenziwa namuhla zinesambulo esiningi. Nakuba kuningi okushintshile indlela yethu yokwenza noma inkululeko yokuzikhethela, njalo kunezindlela zokunqoba indoda ezihambelana nesimo esifanele.
Ungakhohlwa ukuthi uma kuziwa ekuyengeni noma ekunqobeni njalo kube umkhuba wamadoda. Kodwa ngeke sizikhohlise, manje abesifazane nabo bafuna ukuba nezinqola zabo futhi ngenxa yalokhu kufanele baphathe futhi bazi ngokuningiliziwe. ungaqala kanjani lokho kunqoba.
1 Zazise futhi uzibonise ukuthi unjani
2 Kufanele kube kanjani ukuxhumana kwakho?
3 Ngenze ngikukhumbule
4 Beka imfihlakalo encane
5 Mhloniphe lowo muntu futhi umnikeze isikhathi sakhe
Zazise futhi uzibonise ukuthi unjani
Ukuhlola okuhle kakhulu ongakunikeza owesilisa okufanele ahlangane nawe. Siyakwazi lokho umzimba uwela ngaphakathi kwezimfanelo zokuqala lokho kugqama ekuqaleni, kodwa kunamadoda amaningi ahlola ukuthi lo muntu wesifazane uzoba nabuphi ubuntu.
Yenza lokho kuxhumana kwenzeke kufanele ukhombise ukuthi ukhona.
Mamatheka futhi uzethule, ukuba uwena. Asikwazi ukuzenza esingebona, ngoba uma sifuna izinsuku ezengeziwe ezizovela.
Kukhona lokho qiniseka, ukuthi unokulondeka emazwini nasezenzweni zakho.
Umzimba wakho akufanele ube yinto ebaluleke kakhulu, awukwazi ukuphelela, kodwa ukubukeka kwakho kufanele kucoceke futhi kulungiswe. Kufanele ube nokugabadela, nezinwele ezifanele kanye nezimonyo, futhi ungakwazi ukwengeza amakha aphawula ubuntu bakho.
Kufanele kube kanjani ukuxhumana kwakho?
Ungalahlekelwa ukumamatheka kwakho lokho kuwumthombo oyinhloko wokuqala ubungane obuhle. Mbheke emehlweni ngisho noma unamahloni, kodwa ingenye yezinto ezibonisa ukuphepha. Ingxoxo kufanele ibe ukuxhumana. Ungalindi ukuba umlingiswa oyinhloko futhi uhlale ukhuluma ngezindaba zakho, lalela futhi.
Lalela kahle konke engikusho kuwe, msekele ezinqumweni zakhe, umnikeze iseluleko futhi ukhululeke ekunikezeni noma yiluphi uhlobo lweseluleko esingase sibe usizo. Abesifazane banamathuluzi amaningi awusizo okufanele bakwazi sinikeze konke ukwesekwa kwethu, nokuthi indoda izokwazisa.
Gwema ukuphikisana ngezinto ezingabalulekile, hlala ujabule futhi ubonise umdlandla wakho ngaleso sikhathi esihle. Kufanele ubonise njalo uzwela nokuzijabulisa ukwenza kusebenze ukudlidliza okuhle. Awukwazi ukulokhu uphikisana noma uthukuthele ngezinkinga ezincane, ngoba lokho kuzokubangela ukuthi uhambe.
Akukubi ukunaka kwakho ukuyilalela futhi nikeza intshisekelo yakho ngokuthi uyakuthanda. Kodwa ungayiniki amandla amaningi, yenze ikhombise ukuthi wena nawe unempilo yakho.
Ekuqokweni kwakho ungakwazi xoxa, ujabule, hlanganani... futhi kungakhathaliseki ukuthi ufuna kangakanani ukuthi kuhlale phakade, ungakwazi uqede umdlalo kungazelelwe. Ungenza noma yiziphi izaba, ukuthi isithakazelo sakho sisekhona, kodwa ukuthi kufanele unakekele ezinye izibopho. Ngale ndlela uzosala efuna ukubuyela emuva ayokwenza esinye isikhathi futhi ngaleyo ndlela acabange ngawe futhi akukhumbule.
Beka imfihlakalo encane
Le ngxenye ihlobene nokunganiki omunye umuntu amandla. Kufanele kuphethwe ngokuthi awukwazi ukuzinikela ngezinsuku zokuqala futhi unikeze konke Ngale ndlela bayabona ukuthi banakho konke abakuzuzile futhi bazolahlekelwa yinzalo ngokuhamba kwesikhathi.
Ake ngithole ukuthi unjani kancane kancane. Ungakwazi ukunikeza okusemandleni akho ngezinsuku zokuqala ukuze ilukuluku limbamba, kodwa njalo ulondoloze okuningi kwakho ukuze akuthole ngokuthula. Kufana nomdlalo, kufanele dala leyo mfihlakalo kancane, leyo ntshisekelo mayigcinwe. Kodwa ungakuthathi ngokweqile, kufanele ubonise leyo ntshisekelo futhi ungagxumeli echibini kusukela ngomzuzu wokuqala.
Mhloniphe lowo muntu futhi umnikeze isikhathi sakhe
Sonke sidinga indawo yethu futhi asikwazi ukucabanga ngokuzumayo qala ubuhlobo obujulile ngobusuku obubodwa. Mhlawumbe izinhloso zakho zihlukile futhi ungathanda ukuchitha isikhathi esiningi naye ukuze umazi futhi ujabulele ukuba naye. Akufanele ubonise intshisekelo engaka futhi uphoqe ubudlelwano, lapho ukuphelelwa ithemba kuqashelwa, kuzosuka kude nawe. Kufanele uvumele lowo mfana ukuba naye ajabulele ukuphila kwakhe, ukuthi aqhubeke ehlobana nezinto azithandayo nokuthi uchitha isikhathi nabangane bakhe.
Kufanele ube ngowesifazane angamethemba, ongaphendukela kukho njengesiphephelo uma unenkinga. Ukunethezeka nokuzizwa ukhululekile nothile kuza kuqala kunoma ubani. Bayathanda vula nomuntu ozolalela, ukuze bakwazi ukutshela ukungazethembi kwabo, ukwesaba kwabo futhi bakwazi ukuba nomuntu ongabasiza. Uma konke lokho kugcinwa, uzokwazi kube nomuntu eceleni lokho kubonisa inkohliso yakhe ngawe.
Indlela ephelele ye-athikili: Amadoda aSitayela » Kufanelekile » Izithandani Nezocansi » Indlela yokunqoba indoda
Wenzani indoda eshadile uma ithandana nomunye wesifazane